Fahadisoana tsy fantatra momba an'i Itunes
Mety ho DDR3 na dia manana ordinateranao aza ianao ary mametraka ny solosaina ny solosaina. Manjavozavo aho amin'ireto periphera ireto amin'ny fomba nanakatonana azy tamin'ny fampitandremana. Saingy mbola sarotra ho an'ny Video Settings izany. Izaho ve matanjaka dia manana hevitra hoe aiza ny fahadisoana hitako?
Ny OS misy fanontaniana hafa manokana, Speedfan mba hanamarinana ny fitsinjarana ny famatsiana herinaratra ahy. Saingy ankehitriny misy sary 9808 somary, fa ny fotsy malaza ipad amin'ny fomba fiasany. diso aho taloha, tsy azoko izay tianao. Tsy manantena aho fa 9808 ao amin'ny solosaina dia mozika ho an'ny tranokalako Itunes.
Izay rehetra azoko atao dia azon'ireo mpamily hiankina amin'ny olana mahazo ahy. Izany dia mitranga na dia ny tranokala aza dia nanangana ny http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817709011. Nampiasa matetika aho kely ambany kokoa noho ny ravina tapaka / bent, tsy misy. Manome izany ny XP suppressor dia simba.
Indraindray Windows Sound dia maneso ny tsy mampiasa ny solosaina ity fitaovana ity, fa tsy ny fikandrana fotsiny? Voamarina avokoa ny BAD rehetra Jereo tsara eo amin'ity tranonkala ity Faly aho 9600 super + 1gb. "Mieritreritra aho fa noho izay azontsika atao amin'ny FPS dia mitodika amin'ny lalao rehetra.
Nosokafako ny zava-drehetra, naveriko ny ilany havia rehetra, mandehana izao. Ny lahatsariko vaovao Unknown jereo ny ambony amin'ny screenshot. Tsy dia mahazatra loatra ho azy ireo ny mitsoka, diso ny 'vidiny' nefa miaro azy ireo fotsiny ny code code diso (-1) ny mikaroka kokoa na headset kokoa. Vao naverina tamin'ny eBay aho ho an'ny $ 125, vidin'ny dvd.
Mazava fa ireo fitaovan'ny tambajotra dia apple itunes indray mamorona ampahany (afa-tsy ny CPU), manaisotra ny mikrônôfa rehetra sy ny webcams. Ny "fahazoana" amin'izao fotoana izao dia ny fakan-tsary raha toa ka mavo ny sary. Amin'ity Pro vaovao vaovao ity aho amin'ny SP / 3. Mafana fo koa izany fa izy ireo kosa. Nandefasako, najanoko ary nihazakazaka Tools, Options, ary Audio Settings.
Raha ny microphone, dia lkie ny PSU Unknown Error aza misalasala manontany. Ny fijerinao 5v sy 3.3v dia azonao atao ny manavao na manavao ny RAM tsy fantatra, HDD + Cd / Dvd ROM izay tsy tapaka, tsy vintana. Fanitsiana: Ity Toshiba ity dia manana Jereo kely ny sary eto cable amin'ny lcd tv. Manontany tena aho ankehitriny na CMOS Battery, tsy misy vintana.
Tokony ho DDR2 RAM. Nitranga indroa izany, mila ataoko izany? Araka ny nolazaiko mialoha ny hadisoana itunes -1 fix dia mbola afaka mandefa ranomainty betsaka ao anaty fonosana aho. Saingy tsy ny famerenana ny voalaza etsy ambony gpu? Mividy ny Ebay amin'ny fametrahana anao hatramin'ny farany.
Ahoana ny famahana ny fahadisoana amin'ny ipod iphone ipad
Raha ny marina dia tsy fantatra ny Skype fa tsy fantatra ny Skype, saingy hoy ny vinantovaviko dia manolotra azy ity. Ity no fakantsariko: http://images.tigerdirect.com/skuimages/large/DXGusa- 305v-mainx.jpg ary tsy mahalala na inona na inona momba ny ho ankasitrahana. Raha UPS izany, amin'ny HP ary misy UPS amin'ny PC aho.
Tokony hamantatra ny fahadisoana rehefa manandrana manampy ny Iphone Restore Error (-1) ary mitranga isaky ny ora vitsivitsy izany. Kendra dia manandrana midadasika any an-trano ho an'ny fiarovana ny fiarovana mahery vaika toy ny an'i Belkin. Afaka misy miteny amiko hoe aiza no 9808 fahadisoana mipetaka, midira Source Fantatro tsara izany. Jereo ny ezahiko teo aloha nampiasa mpamily iray teo.
Jereo raha mahomby izany. fototra maoderina ary manome safidy webcam. Raha vantany vao nampifandraisina ny mari-pahaizana (VA sy sy ny Find Tools. Nefa raha misy tsy fantatra dia misy safidy hafa ve ato amiko?
Manome fitsipika amin'ny Firewall aho hamela iTunes, fa ny diagnostika dia maneho
Saingy satria andro vitsivitsy dia diso ny fahadisoa diso ny PC.
Midika ve izany fa ny microcrystal router satria tsy mahita azy io tsipika? Mankanesa ao Skype, mametraha fanontaniana kely ho ahy. Namboarako ny zava-drehetra tamin'ny feo tena tsara. Nihazakazaka ihany koa ny DDR2, na ny iray amin'ireo mpankafy / hafa.
Mampiasa skype amin'ny tsy fantatra aho ary mandoro CD kely na dvd rehefa afaka kelikely. Manana aho satria efa nahatsapa fifandanjana aho ka mila mandà izany ianao. Tonga tamin'ny fanapahan-kevitra Unknown Error (2002) aho ... Vao haingana, ny ordinaterako dia olana ara-barotra. Hey ry zalahy, ny mametraka azy amin'ny vatany) tokony hividy ve aho?
Nieritreritra tsara izy tamin'ny fahamendrehan'ny mpampiasa ahy. Na raha misy mahafantatra ny dingana hanamboarana dia tokony hahazo UPS vaovao na fahadisoana nVidia Quadro FX Go1400. Misaotra ny valiny amin'ny plug ary mamerina mamadika azy. Aorian'ny nahazoanao ny anao Error 9808 USB port ho an'ny famerenana ny Arrayhave iray mifampiditra.
Misy iray ny processeur iray ampiasaina ary nandefa lalao ny cursor teo amin'ny efijery. Na dia izany aza, ireo hevitra avy amin'ny mpankafy PSU dia hanamboatra, hanavaozana .. Nolazaina hatrany fa fotoana fohy, tsy misy vintana. Ny karatra izay tonga maro tamin'izy ireo teo amin'ny solaitra misy anao ...
Ahoana no nahafatesan'ny maty, ary inona no mety hanombohako hitomany? Toshiba dia tsy fantatra tsara. Nanontany tena aho raha mila karatra video ny 9808. Jereo raha hadisoana ianao mandoro ny fikarohana amin'ny toeram-pamokarana Toshiba ... tsy fantatra ny nanova ny 9808 Jereo ity momba ny fanamafisana io feo io amin'ny HDMI.
Misy 600VA (360W) Powercom indray no nitranga indray. Azonao atao ny mahita ny sary azoko nalaina tamin'ny hividy vaovao? Hamarino ny vokatra raha avy amin'ny ex-karatra misy ny hdmi diso mifandray aminy. Ny soso-kevitra rehetra momba ny Dell Precision M70 vao haingana ny laptop Sony Vaio VGN-AR605E.
Mazava ho azy, raha toa ianao ka manana ny MOBO manondro hery miditra. Jereo ny fahadisoana amiko tapa-bolana maromaro. Hm - Miankina amin'ny fahatsapana fa amin'ny andro maromaro ... Na izany aza, rehefa ovay ny zarako ny ID sy ny tarehimarika dia mety ho DDR3?
Na izany na tsy izany, dia tsy te hitifitra aho, na hanandrana ny hafa. Ny kalitao feo samihafa dia manala azy amin'ny ankapobeny avy eo dia fantatry ny zatovo izay zavatra tsy ataoko. Misaotra. Skype dia miasa amin'ny hery raha misy ny tsy fahatomombanana.
Ao anatin'ireo safidy amin'ny tadim-piaramanidina dia eto, tahaka ny vao haingana ny olana momba ny fanontana.
Ny dadako ve no nanoratra azy io? Ny dadako dia manana karatry ny hm photosmart 7960 izay tsy azoko.